'Yeropa' Clip Inotanga Kuzivisa Chikara Mukati - iHorror News
musha Horror Varaidzo Nhau 'Yeropa' Clip Inotanga Kuzivisa Chikara Mukati
Vanoda ropa firimu rinotyisa chaizvo iro rinotora kutendeuka kunonakidza neiyo werewolf sub-genre. Mune ino clip tinoona munyori wenziyo, Grey achinetseka nekutsvaga izwi rake pane rake repamoyo album. Nekuedza kutsvaga izwi rake, Grey anotanga pachinzvimbo kuwana mhuka yemhuka mukati.
Mutsara we Ropa inoenda seizvi:
Grey, muimbi weindie, ane dambarefu rekutanga raive smash hit, anowana kokero yekushanda nemuimbi anozivikanwa mugadziri Vaughn Daniels ku studio yake iri kure musango. Pamwe chete nemusikana wake / mudiwa Charlie, vanosvika kuimba yake yemba, uye basa rinotanga. Asi Grey ari kuve nezviratidzo zvekuti imhumhi, uye sezvo basa rake nemweya unodzvinyirira Vaughn uchikura, muimbi vegan anotanga kunzwa nzara yenyama nekuvhima. Sezvo Grey inotanga kushanduka kuita yewolf, anotanga kuziva kuti iye ndiani chaizvo, uye anotanga kuwana mhuri yaaisamboziva. Chii chichatora kuti uve mugadziri mukuru uye pamutengo wei pahunhu hwake?
Vanoda ropa nyika paVOD kutanga Kubvumbi 23.
Uri kufara nezve kutarisa kunze Vanoda ropa? Tiudzei muchikamu chemashoko.
Iyo yekukurudzira: Dhiyabhorosi Akandiita Ndichizviita iyo trailer inoratidza kuti dhiabhori ariko zvechokwadi. Tarisa uone tirera pano.